आज पत्याउनै नसकिने गरी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य – Paluwa Khabar
अषोज १०, २०७८ आइतबार 69
कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । सुन हिजोकै मूल्य प्रतितोला ८९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य ८८ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ ।
आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेर ११ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
Prevबालिकाको बयान : २९ जनाले नौ महिना सम्म पालै पालै….
Nextसरकारी जागिर खुल्यो ? छिटो भन्दा छिटो यस नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस, यसरी दिनुहोस् आवेदन?
बाघले आ८क्र’मण गरि पि’सा’ब फे’र्न गएका एक युवकलाई जं’गलतिर लग्यो,खोजी कार्य सुरु !
आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी अदालतले लगायो टिकटक माथि प्र’ तिबन्ध